Malunga nathi - CHANGZHOU INJINI irabha & zeplastiki CO., LTD
Ukuzibophelela kwiimveliso zeyoga ukuze uphile kwaye wonwabe, wena, kwihlabathi lonke！
INJINI yasekwa ngo-2012, umzi-mveliso owenzelwe imveliso ye-yoga, ebekwe e-Changzhou, iziko lokuvelisa lommandla we-Yangtze River Delta.
INJINI yinkampani yokudibanisa uyilo, uphando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo, kunye nokuthengiswa okupheleleyo kunye nokhuphiswano oluphambili.
INJINI isebenze amakhulu eenkampani kwihlabathi liphela. Ngaphezulu kwama-30 kubo ngabathengi bexesha elide. Ngexesha lale nkqubo, umgangatho weemveliso zethu kunye neenkonzo zamkelwe kakuhle.
Njengeqela lobuchwephesha, sizibophezele ekudaleni uphawu lwethu ngelixa sinika iinkonzo ezilungileyo kubathengi behlabathi.
IINJINI lolona khetho lwakho lulungileyo kumaqabane oshishino.
I-CHANGZHOU ENGINE RUBBER & PLASTIC Co., Ltd.yifektri egxila kwimveliso yebhodi ye-foam ye-PE, ibhodi ye-foam ye-EVA, ifilitha edibeneyo ye-PE, ibhedi yeyoga, ibhloko ye-yoga, izileyi zegwebu kunye nepali yokulinganisa.
Ngenkxaso yedatha enkulu yabathengi, besisebenza nzima ukuphucula, ukuphuhlisa kunye nokwenza iimveliso ezingcono. Okwangoku, iinjineli ziphumelele kakuhle kuphuhliso lwasekhaya nakwamanye amazwe. Sinikezela abathengi ngokusebenza okuphezulu, iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngokusekwe kwimigangatho esemgangathweni yomgangatho wecandelo.
Umxholo "wokuphuhlisa iimveliso zetekhnoloji ephezulu kunye nokuhlala kwindawo ephambili kumzi mveliso" usikhokelela ekubeni siqhubeke siphucula kwaye sicebisa iindidi zemveliso ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.
INJINI yinkampani yokudibanisa uyilo, uphando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo, kunye nokuthengiswa okupheleleyo kunye nokhuphiswano oluphambili. Efektri yethu ithatha indawo ye 10,000 yeemitha zesikwere, kunye nezixhobo zemveliso eziphambili, amandla emveliso, abasebenzi abanamava, kunye nenkqubo engqongqo yeQC
Umgca wokuqala wokuvelisa amagwebu wakhiwa, kwaye imveliso yokuqala yolingo yaba yimpumelelo egqibeleleyo.
Imigca emibini yokuvelisa amagwebu yongezwa kwisiseko sokuqala, kunye namandla emveliso aphindwe kabini.
Inani leelayini zemveliso lenyuke laya kwi-4, kwaye imveliso yaqalwa ngokupheleleyo. Ukuthengisa kuyaqhubeka nokukhula, kunyuke i-100% ngonyaka-ngonyaka.
Inkampani yafuduka kwilali yaseMoujia yaya kwilali yaseShijiaxiang.
Ukusukela ngo-2012, iiNjini zivelise iimveliso zeyoga, kakhulu.
Ukomelela kwethu kwe-yoga mat kwenziwa nge-100% yezinto ezinyulu, ngoxinano oluphezulu kunye nomgangatho okhululekileyo, ubukhulu be-6mm rhoqo.
Ibhloko yethu yeyoga yokomelela yenziwa ngogwebu lwe-EVA, ngoxinano ukusuka kuma-66-76 kg / CBM. Yomelela kwaye inamanzi-ubungqina, esetyenziselwa ukulungelelanisa ukuma komzimba.
Isomelele yethu amagwebu roller yenziwa ngezinto ze-eco. Indawo yayo ye-3D yokuthambisa inokudambisa izihlunu eziqinileyo, ezisetyenziswa kunyango lomzimba.
▪Ukufumana ixabiso elikhulu
▪Low MOQ & OEM & inkonzo ODM
▪ Amava eminyaka eli-15 kunye neziQinisekiso ezingenakubalwa
Umzi mveliso wethu unezixhobo zemveliso ezingaphezulu kwama-30 zokuqinisekisa umgangatho weemveliso. Abasebenzi bethu baqeqeshiwe kwaye baneminyaka eli-10 yamava okusebenza.
Imithwalo kwihlabathi liphela, ngentliziyo enye idlula kwizigidi ezili-100.
Ndiyathemba ukuba ngemizamo engagungqiyo yabo bonke abo basebenza nabo, iimveliso zenkampani zinokuya kwihlabathi.
Ngelixa ufezekisa ubizo lwenkampani, inokufikelela kwisiseko sabo bonke oogxa babo
Yenza ixabiso kubathengi kwaye uzenzele amathuba.
Inkampani ihlala ibambelela kumgangatho kuphela wabathengi kuqala, kwaye izama ukuphucula umgangatho wemveliso kunye nokunyusa umgangatho wetekhnoloji.
Ngelixa kusenziwa ixabiso eliphezulu kubathengi, ikwakudala namathuba enkampani kunye nabo bonke abo basebenza nabo ukuba baqonde iinjongo zabo ebomini!
Ukuzibophelela kwiimveliso zeyoga ezinokuzisa ubomi obonwabisayo kubantu kwihlabathi liphela.
I-Yoga ngumthambo oneminyaka engama-5 000 ubudala ngomzimba, ingqondo kunye nomoya. Injongo yayo kukuphucula impilo yomntu kunye nengqondo, ukuze afezekise imeko yomanyano lomzimba nengqondo.
Ekuqaleni kwenkampani yethu yokuzibeka uphawu, sithathe "iimveliso zeYoga ezisa ubomi obonwabisayo kubantu kwihlabathi liphela" njengemishini yethu, ukuze abantu abaninzi ngakumbi bafumane ubomi obusempilweni nobuhle kwezemidlalo.